Stephen Hawking agabiga. Akwụkwọ isii onye astrophysicist a ma ama hapụrụ anyị | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Akwụkwọ, Noticias
Taa agaala Stephen Hawking. Enwere m 76 afọ ma ikekwe ọ dịlarị n'otu n'ime mbara igwe ya, oghere ojii ma ọ bụ ụyọkọ kpakpando. Ma ọ bụ ma eleghị anya, ọ ghọọla kpakpando kachasị ama ama na o jisiri ike dịrị na ndụ ya. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ na-ahapụrụ anyị nnukwu ihe nketa ahụ magburu onwe ya ọ chịkọtara ụfọdụ akwụkwọ, ebe ọ bụ na ọ bụkwa nnukwu onye na-ewu ewu. M ga-echeta ya Isi 6 iji nye ha nyocha.
1 Ihe omumu banyere ndu mmadu
2 Obere oge
3 Ozizi nke ihe niile
4 Mmalite nke eluigwe na ala
5 Eluigwe na Ala na Mbipụta
6 Oghere ojii na obere eluigwe na ala
7 Short akụkọ nke ndụ m
Ihe omumu banyere ndu mmadu
Igbu, mụrụ na Oxford na Jenụwarị 1942, ọ hapụrụ anyị n'ụtụtụ a gara aga n'ụlọ ya na Cambridge. Ogologo ndụ ya karịrị akara ndụ ya nke akara ALS, bụ nke ọ tara ahụhụ kemgbe ọ dị afọ iri abụọ na otu ma mee ka ọ nọrọ n'oche nkwagharị. Ma ebe ọ bụ na 21 ọ nwere ike ikwurịta okwu naanị site na ịkwaga akwara n'okpuru anya ya nke ọ na-eji arụ ọrụ okwu. Ma nkwarụ ahụ emeghị ka uche ya gwụ.
Ghọrọ ọkà mmụta sayensị kacha mara amara nke uwa si 1988 mgbe o bipụtara Akụkọ ihe mere eme, akwụkwọ ahụ buliri ya elu. Ọtụtụ n'ime aha ahụ bụkwa n'ihi nnukwu ya talent maka sayensị a ma ama nke astrophysics, nke o weputara n'uwa dum. Ma ọ nwekwara akwa ọchị. Maka ọgbọ ọhụrụ, ma ọ bụ karịa telivishọn, nsonye ha, nke jupụtara n'ọchị ahụ mgbe niile, na usoro ndị ama ama ga-anọgide na retinas The Big Bang Theory, nke akpọrọ aha ya nke ọma site n’ozizi ya a ma ama nke o jiri zoo aka na mmalite nke ohere na oge.
The ikpeazụ ịmata na ọ na-ahapụ anyị bụ na ọ na-arahụ na Pi nọmba ụbọchị (3,14 ...) na na Albert Einstein ụbọchị ọmụmụ 139th. Taa nwekwara ike ịbụ ụbọchị dị mma iji hụ Ozizi nke ihe niile, ihe nkiri nke 2014 nke ahụ bara uru a Oscar nke kacha mma omee ka Eddie redmayne maka nkọwa ya nke Hawking.
Akwụkwọ nke ngosi banyere ohere na oge ebe Hawking n'egosiputa na nkenke echiche nke Newtonian arụzi, relativity tiori, kwantum arụzi ma ọ bụ cosmology dịkọrọ ndụ. Ọ na-egosikwa na mbara mbara dị ka metaphysics na nkà mmụta okpukpe, ebe ọ bụ na ọdịdị abụghị naanị onye okike Chineke na-ebili, kamakwa onye na-akwado ihe eluigwe na ala pụtara.
Ozizi nke ihe niile
N'ime ọrụ a Hawking na-agwa anyị a akụkọ ihe mere eme nke eluigwe na ala nke na-aga site ọdịda nnukwu ka oghere ojii. Ọ na asaa nzọụkwụ bido na nchepụta izizi nke ụwa Greek na oge ochie rue oge dịkarịsịrị mgbagwoju anya nke ụbọchị ndị a. Jiri njirimara gị ụda olu ma nwee ike ịnweta ya niile na-ege ntị. Ndị na-ede akwụkwọ ya dịka Newton, Einstein, ndị na-ahụ maka ihe ndị ọzọ, oghere ojii na nkwupụta nke ịdị n'otu jikọtara ọzọ.
Mmalite nke eluigwe na ala
Dere ya na nwa ya nwanyi bu Lucy, agwakọta nnukwu sayensị njem akụkọ maka ụmụaka. Nnukwu nnyocha sayensị na akụkọ ihe mere eme na oru na George na Annie, ndị protagonists, ga-ahụ ya site na ahịrị ihu. Ha ga-eso Eric, nna Annie, onye na-arụ ọrụ na European Center for Nuclear Research, ga Switzerland.
Enwere nnukwu ngwakọta ngwugwu, enwe ike nyochaa oge mbụ nke ụwa, nke a na-akpọ Big Bang. Ndị ọkà mmụta sayensị gburugburu ụwa nọ na-arụ ọrụ na nnwale ahụ ruo ọtụtụ afọ ma ọ dịghị ihe nwere ike ịgahie. Ma George na Annie mechara chọpụta atụmatụ imebi ya. Ajụjụ bụ ịchọpụta ma ha ga-abịa n’oge iji gbochie ya.
Eluigwe na Ala na Mbipụta
Ọzọ na ụda olu ya, Hawking na-akpọ anyị ka anyị sonyere ya na a nnukwu njem site na ohere-oge kwuputa na ala ebube nke ihe nkpuru, membranes na string di egwu na iri na otu. N'otu oge, oghere ojii na-agbapu ma pụọ, na-ewere ihe nzuzo ha. Anyị ga-akwụsịkwa ebe obere akụ ahụ bi -akpa nkpuru uwa- site na nke eluigwe na ala anyị bi n'ime ya bilitere.
Oghere ojii na obere eluigwe na ala
Ọrụ a bụ nchịkọta ederede onye bekee dibia bekee dere n'etiti 1976 y 1992. Edere ha ihe karịrị afọ iri na isii. Mejupụtara imeghari -mgbe autobiographical osise ọbụna nkọwa doro anya na nke ụtọ nke isi nsogbu na physics taa - na-egosipụta ọnọdụ na-aga n'ihu nke ihe ọmụma Hawking. E nwekwara nkuzi na Ajụjụ ọnụ ebe Hawking na egosi anyi ihe ohuru ohuru banyere uwa.
Short akụkọ nke ndụ m
Aha a bu autobiography dị nkenke ma nwee ezi obi ebe Hawking na-ekwu maka ndụ ya, site na nwata ya na London mgbe agha lụsịrị ruo afọ ya nke ụwa ama na ihe ịga nke ọma. Nke a e ji foto a na-amachaghị ama see ma nye anyị Hawking dị ka ya nwata akwukwo onye na aju ajuju ma ndi umu akwukwo ibe ya guru ya "Einstein." Ọzọkwa ka egwuregwu bụ onye ya na onye ọrụ ibe gị nọ na-agba bọọlụ otu oge. Na nne na nna na-eto eto onye gbaliri ime ka ulo akwukwo di egwu.
Edere ya na obi ume ala na ọchị na ya Hawking mepee banyere nsogbu ọ ghaghị ịnagide mgbe a chọpụtara ya amyotrophic n'akụkụ sclerosis. Atụmanya nke ọnwụ mbụ dugara ya n'ịzụlite echiche ya na nsogbu ịma ọkwa ọgụgụ isi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Noticias » Stephen Hawking agabiga. Akwụkwọ isii ndị astrophysicist a ma ama hapụrụ anyị
Daalụ Francisco. Ọ bụrụ n’ị bụkwa onye na-agụgharị ihe, enwere m obi ụtọ na-asị otu onye ọrụ ibe m.
Medina Roberto dijo
Ọ hapụrụ anyị otu n’ime ndị kasị ibu; ọgụgụ isi ya, echiche ọchị ya, obi ike ya na enweghị ike ịgbanwe agbanwe, ịkwụwa aka ọtọ ya nke ọgụgụ isi, gosipụtara ya dị ka onye pụrụ iche. Mee njem dị mma na kpakpando, ezigbo Stephen, a ga-echeta gị !!!
Zaghachi Roberto Medina
Akwụkwọ iri ha: akụkọ n’etiti stovu.